Fahadisoana matetika momba ny lalàna an-dranomasina 10 any UAE | Law Firms Dubai
Fahadisoana matetika momba ny lalàna an-dranomasina 10 any UAE
Rahoviana no mila mpisolovava an-dranomasina?
Fitakiana karatra an-dranomasina any UAE
Ny sehatry ny asa an-dranomasina UAE dia iray amin'ireo faritra namela ny fanatontoloana ara-toekarena. Io kosa dia nanjary fitomboan'ny harinkarenan'i UAE. Araka izany, ny orinasan-dranomasina UAE dia nanjary indostria goavambe vetivety.
Ny UAE dia manana seranana 12 rehetra ankoatry ny seranan-tsolika. Ary araka ny World Council Council, roa amin'ny seranan'i UAE no iray amin'ireo Seranan-tsambo fitaterana 50 an'izao tontolo izao, miaraka amin'i Dubai amin'ny 10 voalohany.
Ankoatr'izay, 61% ny entana mankany amin'ny Filan-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa no tonga voalohany amin'ny seranan'i UAE. Ity dia mitohy mba hanehoana ny fivoaran'ny sehatr'asa seranan-tsambo ao UAE.
Ny indostrian'ny seranan-tsambo mitombo dia mety hitarika fiakaran'ny olana ara-dalàna mifandraika amin'izany. Ny raharaha ara-dalàna toy ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina, ny fitakiana an-dranomasina, ny fatiantoka entan'ny entana dia mety hitranga. Ary ho an'ireo olana ara-dalàna rehetra ireo, ny lalàna samihafa dia toy ny torolàlana amin'ny famahana izany. Ireo lalàna ireo dia fantatra amin'ny hoe lalàna an-dranomasina.
Andao hiroso amin'ny antsipiriany momba ny inona ny lalàna an-dranomasina alohan'ny handinihana ireo lesoka iraisana momba ny lalàna an-dranomasina.
Inona no atao hoe lalàna an-dranomasina?
Ny lalàna an-dranomasina, antsoina koa hoe lalàna momba ny fahamendrehana, dia vondron-dalàna, fifanarahana ary fifanarahana izay mifehy ny raharaha an-dranomasina manokana sy ny orinasa nautika hafa toy ny fandefasana entana na fandikan-dalàna mitranga amin'ny rano misokatra.
Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny International Maritime Organisation (IMO) dia nametraka fitsipika maromaro azon'ny tafika an-dranomasina sy ny mpiambina ny morontsiraka ny firenena samy hafa. Ireo firenena nanasonia fifanarahana tamina IMO dia mety handray ireo lalàna ireo ao anatin'ny lalàna mifehy azy ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny lalàna an-dranomasina dia namboarina araka ny lalànan'ny IMO izay mifehy ireto manaraka ireto:
Fangatahana fiantohana mifandraika amin'ny sambo sy entana
Olana sivily misy tompona sambo, mpandeha ary tantsambo
Fisoratana anarana sy fahazoan-dàlana
Fomba fizahana ny sambo
Fitaterana entana sy mpandeha
Iray amin'ireo adidy voalohany amin'ny IMO ny miantoka ny fanavaozana ny fivoriambe an-dranomasina iraisam-pirenena. Izy ireo koa dia manao ny adidiny amin'ny famolavolana fifanarahana vaovao amin'ny firenena hafa rehefa misy filàna.
Hatramin'izao, fivoriambe marobe no mifehy lafiny samihafa amin'ny varotra sy fitaterana an-dranomasina. Anisan'ireo fivoriambe ireo ny IMO nanonona ny telo ho toy ny fivoriambe ifotony. Ireto fivoriambe ireto dia:
Ny fivoriambe iraisam-pirenena dia miaro ny fiainana mandritra ny fotoana an-dranomasina
Mandrara ny fahalotoan'ny sambo ny fivoriambe
Ny fivoriambe mifandraika amin'ny lafiny fiofanana, fanamarinana ary fitandremana ireo tantsambo
Ny governemanta ao amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny fikambanana dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny fivoriambe notendren'ny IMO any amin'ny fireneny. Ireo governemanta ireo dia nanohy nametraka sazy noho ny fandikana ny fivoriambe.
Ny lalàna UAE dia mandray ny ankamaroan'ny endrika amin'ny fivoriambe iraisam-pirenena momba ny dranomasina. Ireo lalàna an-dranomasina ireo dia mihatra amin'ny Emira rehetra any UAE.
Ny UAE dia manana lalàna mivoatra an-dranomasina efa mandroso, miaraka amina lalàna maromaro izay tsy mitovy amin'ny faritra hafa. Na izany aza, mbola misy ny faritra manjavozavo eny an-tsaha, izay mety hiteraka fifanolanana sasany, ary lesoka amin'ny fifanarahana an-dranomasina. Ny lalàna an-dranomasina UAE dia eo ambanin'ny lalàna Federalin'ny Emira Arabo Mitambatra voasoratra ao amin'ny No. 26 of 1981. Ity fizarana amin'ny lalàna ity dia mamaritra ny lalàna mifehy ny asa fandefasana entana any UAE. Io lalàna io dia novaina tamin'ny taona 1988 mba handinihana lohahevitra maro kokoa.
Ny fitakiana an-dranomasina UAE
Amin'ireo lalàna amoron-dranomasina UAE, ny fitakiana an-dranomasina dia matetika no mahasarika. Araka ny lalàna an-dranomasina, ny tranga sasany dia mety miteraka fitarainana samihafa. Ireo tranga ireo dia voafaritra ao amin'ny lalàna an-dranomasina UAE.
Mety ho ara-teknika ny lalàna an-dranomasina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpisolovava an-dranomasina rehefa sendra lozam-pifamoivoizana tamina sambo iray. Ireo lozam-pifamoivoizana ireo dia mety ny fifandonana amin'ny sambo na ny ratra mahazo azy manokana rehefa ao anaty sambo iray.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny lalàna an-dranomasina UAE dia mamaritra fetr'andro amin'ny karazana fitakiana. Ireto ny fandaharam-potoana amin'ny fitakiana isan-karazany ao UAE:
Ny fangatahana momba ny ratra manokana vokatry ny tsy fitandreman'ny tompon'ny sambo dia tsy maintsy apetraka ao anatin'ny telo taona.
Ny antoko catheter dia afaka mametraka fitoriana amin'ny tompon'ny sambo noho ny fahasimban'ny entany. Tokony hanao izany anefa izy ireo ao anatin'ny 90 andro.
Ho an'ny fifandonana amin'ny sambo, ny olona iray dia tsy maintsy mametraka fitakiana ao anatin'ny roa taona.
Ny fe-potoana fe-potoana hanaovana fiantohana an-dranomasina dia roa taona.
Roa taona noho ny fanambarana mifandraika amin'ny fahafatesan'ny olona na ratra manokana.
Ny olona iray dia tsy maintsy mametraka fitakiana ao anatin'ny enim-bolana raha tara ny fanaterana entana toy ny voalaza ao amin'ny fifanarahana fifanarahana teo amin'ny tompon-tsambo sy ny tompon-tsambo.
Ny ankamaroan'ireo fanambarana ireo dia miankina amin'ny fifanarahana fifanarahana teo amin'ny olona iray sy ny tompon'ny sambo. Io, amin'ny lafiny lehibe, dia hamaritra raha afaka mametraka fitakiana ilay olona na tsia. Izany no antony iray hafa mahatonga ny mpisolovava an-dranomasina manan-danja amin'ny fifandraisan-davitra.
Fahadisoana mahazatra maratra voajanahary
Rehefa mametraka fangatahana ratra manokana mahazo ny sambo iray dia misy ny lesoka mahazatra.
Anisan'izy ireo ny:
# 1. Mihoatra ny milaza ny fitakiana
Misy olona tsy manome fitantarana marina ny amin'ny fomba nitrangan'ny loza. Indraindray dia manitatra ny zava-nitranga izy ireo ka nahatonga ny ratra. Ny fanatanterahana izany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fitakiana onitra.
# 2. Matoky tena loatra fa ny mpitsara na ny mpitsara dia hanome azy ireo izay sahaza azy
Indraindray ny mpitsara na ny mpitsara dia mety tsy resy lahatra tanteraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny tsirairay. Izany no antony tsy maintsy ahazoana mpisolovava an-dranomasina manam-pahaizana hanampy anao hiady amin'izay mendrika anao. Ny mpisolovava amin'ny amiraly dia hanampy anao hilaza ny raharaha amin'ny fomba maharesy lahatra.
# 3. Matoky ny olona tsy mety
Ny ankamaroan'ny tantsambo maratra dia matoky ny tompona sambo manatona azy ireo tsy mitady torohevitra ara-dalàna. Ny tompon'ny sambo dia mety efa nampanantena fa handoa vola amin'ny tantsambo maratra isam-bolana.
Alohan'ny hanaiky ny fifanarahana toy izany dia tsara kokoa ny mitady torohevitra ara-dalàna. Izany dia satria ny tompony dia mety manolotra vola kely kokoa noho izay tokony aloa. Ary rehefa tsy izany dia tsy voafatin'ny lalàna hitana ny teny fikasana izy ireo.
# 4. Mitantana samirery ny fitakiana
Ny olona iray izay tsy manana ny fahaizana ara-dalàna takiana dia tokony hangataka fanampiana ara-dalàna. Ny fametrahana fitakiana tsy misy fahaiza-manao sy traikefa ilaina dia mety hiteraka lesoka isan-karazany. Izy io kosa dia mety hiteraka tsy fahombiazana amin'ny fahazoana onitra.
# 5. Tsy mametraka fitakiana rehefa mety
Misy fe-potoana samihafa amin'ny fametrahana fitakiana. Hotsipahan'ny Fitsarana ny fangatahana rehetra izay tsy apetraka ao anatin'ny fe-potoana voatondro. Araka izany dia tsara kokoa ny mifandray amin'ny mpisolovava an-dranomasina avy hatrany aorian'ny tranga voalaza.
# 6. Tsy mahavita mitady onitra
Rehefa sendra lozam-pifamoivoizana an-dranomasina ny olona iray, dia zon'izy ireo ny mitady onitra. Ka ny olona iray dia tokony hangataka onitra manoloana ny fahasahiranana natrehin'ilay olona.
# 7. Manaiky ho ambany onitra
Rehefa mametraka fitoriana ny olona iray, dia mety te hampijaly azy ireo ny orinasa fiantohana mba hanaiky ny tolotra omeny. Na izany aza, amin'ny fisoloana tena ara-dalàna dia tsy hahomby ny paikadin'ny orinasa fiantohana. Ny mpisolovava an-dranomasina dia hanao fiezahana mafy mba hahazoana antoka fa manome tambiny sahaza ilay niharam-boina ny orinasam-piantohana.
#8. Mangataka be loatra
Rehefa mametraka fitakiana dia mila manana ny zava-misy ny olona iray. Tsy maintsy mitady tambin-karama mifanaraka amin'ny ratra nahazo azy ireo izy ireo. Matetika, ny tamby omen'ny orinasa fiantohana dia ny fandoavana ny saram-pitsaboana an'ilay olona. Ny mpisolovava an-dranomasina dia afaka manampy anao amin'ny kajy ny onitra mendrika anao. Amin'izay dia tsy hitaky be loatra ianao na kely loatra.
# 9. Ny sonia antontan-taratasy aloha loatra
Taorian'ny ratra nahazo sambo iray, ny olona iray dia mety hahazo mpitsidika avy amin'ny orinasam-piantohana manandrana mitaona azy ireo hanao sonia fifanarahana. Ilay olona dia tokony hijanona tsy hanao sonia fifanarahana raha tsy misy ny torohevitra ara-dalàna avy amin'ny mpisolovava an-dranomasina.
# 10. Manome tsiny
Aorian'ny ratra dia tsy tokony hanaiky ny fahadisoana ny olona iray, na dia mahatsapa ho diso izy ireo. Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mifandray amin'ny mpisolovava an-dranomasina ary ampifandraiso amin'izy ireo ny zava-nitranga iray manontolo.
Mifandraisa amina mpahay lalàna an-dranomasina UAE manam-pahaizana
Ny Emira Arabo Mitambatra dia iray amin'ireo firenena vitsy ao amin'ny GCC miaraka amin'ny rafitry ny lalàna an-dranomasina feno sy maoderina. Na izany aza, ny UAE dia mbola manana tsy fahampiana marobe amin'ny lalàna an-dranomasina sy amin'ny rafitra fanaraha-maso an-dranomasina amin'ny ankapobeny.
Raha mikasika ny fanakaramana mpisolovava an-dranomasina UAE dia mila olona fantatrao ny momba ny lalàna mivoaka sy an-dranomasina. Mety ho ara-teknika ny lalàna an-dranomasina satria misy fomba sy toro lalana marobe momba ny hetsika an-dranomasina. Ireto hetsika ireto dia mety ahitana ny fametrahana fitakiana an-dranomasina, ny fanaovana sonia fifanarahana, ny fisoratana anarana amin'ny sambo, ny fanaovana boaty sns
Amal Khamis Advocates dia mitarika mpiaro ny lalàna an-dranomasina UAE. Manome torohevitra sy fanampiana ara-dalàna izahay amin'ny fifanolanana an-dranomasina vokatry ny fifanarahana an-dranomasina, fitaterana entana, ary ny sarintany. Ny mpanjifanay dia miorina any UAE sy manerana ny Moyen Orient. Afaka manampy anao handresy ny raharaha ianao ary hahazo ny tambiny mendrika anao.
Ao amin'ny Amal Khamis Advocates Legal consultant, manana mpisolovava manana fahalalana sy traikefa lehibe amin'ny lalàna an-dranomasina izahay. Manaraka tsara ny mpanjifanay izahay ary manandrana miara-miasa amin'izy ireo hiarovana ny zon'izy ireo sy ny tombontsoany. Mifandraisa aminay anio mba hangataka fanampiana ara-dalàna momba ny raharaha an-dranomasina.